Shiinaha Wax soosaarka silig ahama ee waxsoosaarka waxsoosaarka iyo warshad | Shougang
Shirkadeenu waxay leedahay taariikh ka badan 60 sano soo saarista birta aan lahayn. Adoo dooranaya alaab ceyriin oo tayo sare leh iyo qaadashada habsami u socodka foornada saddex waji elektaroonigga ah + foornada hal weji ah el foornada faaruqinta ah . Taxanaha Baarka, siligga iyo kaabbada xargaha ayaa la bixin doonaa.
Strip Qabow duubay
kulul duub Strip
Xarig duuban oo qabow
Dhumucdiisuna waa 0.05-0.35mm
Biraha birta ah
Isku-darka kiimikada ee biraha bilaa-biraha ah
aan ka weyneyn
Magaca Badeecada: 904L
Guryaha jirka: 904L, cufnaanta: 8.24g / cm3, barta dhalaalaysa: 1300-1390 ℃
Daaweynta kuleylka: ilaalinta kuleylka inta udhaxeysa 1100-1150 ℃ 1-2 saacadood, qaboojinta hawo deg deg ah ama qaboojinta biyaha.
Guryaha Farsamada: xoog siligga: B ≥ 490mpa, dhal xoog σ B ≥ 215mpa, dheereynta: δ≥ 35%, adkaansho: 70-90 (HRB)
U adkaysiga daxalka iyo deegaanka ugu weyn ee laga codsado: 904L waa nooc ka mid ah birta austenitic ahama ee ka kooban kaarboon yar iyo maadada sare ee alxanka, oo loogu talagalay xaaladaha daxalka adag. Waxay leedahay caabbinta daxalka oo ka wanaagsan 316L iyo 317L, waxayna tixgelineysaa qiimaha iyo waxqabadka, waxayna leedahay saamiga waxqabadka sare. Marka lagu daro 1.5% naxaas ah, waxay leedahay caabbinta daxalka u fiican ee yareynta asiidhyada sida sulfuric acid iyo phosphoric acid. Waxa kale oo ay leedahay iska caabin u nuglaanta daxalka cufnaanta, daxalka daloolka iyo dillaaca daloolka ee ay sababaan maadada chloride, waxayna leedahay iska caabin wanaagsan daxalka u dhexeeya. Xaddiga uruurinta ee 0-98%, heerkulka 904L wuxuu sare u kici karaa 40 ℃. Inta udhaxeysa 0-85% acid fosforik, iska caabinta daxalka ayaa aad ufiican. In warshadaha fosfoorik acid soo saaray by geeddi socodka qoyan, wasakhda waxay leeyihiin saamayn xoog leh iska caabin ah daxalka. Noocyada kala duwan ee fosfoorik acid, iska caabbinta daxalka ee 904L ayaa ka wanaagsan tan birta aan caadiga ahayn. Qiiqa adag ee oksaydhka nitric acid, iska caabinta daxalka ee birta 904L ayaa ka hooseysa tan birta daawaha ah ee sare ee aan lahayn molybdenum. Aashitada hydrochloric, isticmaalka 904L wuxuu ku egyahay uruurinta hoose ee 1-2%. Qeybtaan urursiga. Diidmada daxalka ee 904L ayaa ka wanaagsan tan birta caadiga ah ee birta ah. Birta 904L waxay leedahay iska caabin sare oo ku timaada daxalka. Xalka chloride, tamarta adkaysiga daxalka dillaacinteeda. Xooggu sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Nukliyeerka badan ee 904L wuxuu yareeyaa heerka daxalka ee godadka iyo dillaacyada. Birta aan caadiga ahayn ee austenitic ahama ayaa laga yaabaa inay u nuglaato daxalka culeyska ee jawiga hodanka leh ee koloriinku marka heerkulku ka sarreeyo 60 ℃. Dareemida waxaa lagu yareyn karaa iyadoo la kordhiyo waxa ku jira nikkel ee birta birta ah. Maaddaama ay ka kooban tahay nikkel-ka sarreeya, 904L waxay leedahay caabuq dillaaca daal cadaadis sarreeya oo ku jira xalka chloride, xalka hydroxide urursan iyo deegaanka hodanka ku ah hydrogen sulfide.
Magaca Badeecadda: 304L
Guryaha jirka: cufnaanta ayaa ah 7.93 g / cm3
30L ahama waa bir bir ah oo aan caadi ahayn, oo si ballaaran loogu isticmaalo birta birta ah ee birta ah. Waxay leedahay iska caabin daxalka wanaagsan, iska caabinta kuleylka, xoog heerkulka hooseeya iyo aaladaha farsamada. Waxay u adkaysataa u nuglaanta jawiga. Hadday tahay jawi warshadeed ama aag aad u wasakhaysan, waxay u baahan tahay in lagu nadiifiyo waqtiga si looga fogaado daxalka. Waxay ku habboon tahay habeynta cuntada, keydinta iyo gaadiidka. Waxay leedahay farsamayn wanaagsan iyo alxamid. Badeecada kuleylka kuleyliyaha, barkadaha, alaabada guriga, qalabka dhismaha, kiimikada, warshadaha cuntada, iwm.
Magaca badeecada: 309Nb
Guryaha jirka: xoog siligga: 550MPa, dheereynta: 25%
Astaamaha iyo jihada alxanka:
309nb wuxuu leeyahay daboolid aashitada nooca rutile ah waxaana loogu talagalay in lagu beddelo alxanka korantada hadda jira ama togan. 309nb waa nooc ka mid ah 23CR13 Ni alloy，Ku darida niobium waxay yareyneysaa kaarboonka waxayna siineysaa iska caabin wanaagsan roobka carbide, sidaas darteedna waxay kordhineysaa caabbinta xadka soohdinta nukliyeerka. Waxay sidoo kale bixisaa awood sare oo ka hooseysa jawiga heerkulka sare waxay ku habboon tahay alxanka heerkulka sare ee ASTM 347 bir isku dhafan ama birta kaarboonka loogu talagalay alxanka dusha sare.
309nb sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu alxameeyo kaarboonka kaarboonka hooseeya iyo birta biraha ah.
Magaca Product: SUS434
Guryaha jirka: Awood soo saar shuruud leh σ 0.2 (MPA): ≥ 205 Dheereyn δ 5 (%): ≥ 40 Yaraynta aagga ψ (%): ≥ 50
Adkaanta: ≤ 187hb; Hr 90hrb; H 200hv
Astaamaha SUS434 / 436/439 birta birta ah ee birta ah: birta wakiilka ah ee birta birta ah, oo leh heer ballaarin kuleyl hooseeya, qaabeyn wanaagsan iyo iska caabin qiiqa. 430 waxaa loo isticmaalaa sida wax soo saarka wax lagu nadiifiyo sida gudiga qurxinta gudaha gudaha, iyo 434 iyo 436 birta birta ah ayaa loo isticmaalaa marka loo baahdo caabbinta daxalka oo wanaagsan. 436 waa darajo bir ah oo wax laga beddelay oo ah 434, taas oo yareyneysa u janjeedhidda "laalaabashada" hawlgallada fidinta ee aadka u adag. Codsiga: kuleylka u adkaysta kuleylka, shooladda, qaybaha qalabka guryaha, fasalka 2aad miiska, haanta biyaha, qurxinta, fur iyo lowska.
Magaca Product: SUS630/632
Soo bandhigida alaabta:
630/632 waa roobab martensitic sii adkeynaya birta birta ah ee birta ah. Waxay leedahay awood sare, adkaansho sare, waxqabadka alxanka wanaagsan iyo iska caabinta daxalka. Ka dib daaweynta kuleylka, sifooyinka farsamada ee alaabooyinka ayaa kaamil ah, taas oo gaari karta xoogga cadaadiska ee 1100-1300 MPa (160-190 Ksi). Darajadan looma isticmaali karo heerkul ka sarreeya 300 ℃ (570f) ama heerkul aad u hooseeya. Waxay leedahay caabbinta daxalka wanaagsan ee jawiga iyo asiidh ama milix la qasi jiray. Caabbinta daxalkeeda waxay lamid tahay tan 304 iyo 430. 630/632 ayaa si balaaran loogu isticmaalay waalka, usheeda dhexe, warshadaha fiber-ka kiimikada iyo qaybo xoog sare leh oo leh shuruudaha iska caabin daxalka qaarkood. Qaab dhismeedka metallographic: astaamaha qaabdhismeedka ayaa ah nooca roob adkaanta.
Codsiga: waxaa loo isticmaalaa qaybaha waxsoosaarka oo leh caabbinta daxalka iyo xoogga sare, sida saa'idka iyo qaybaha marawaxadaha uumiga.
Magaca Magaca: 05cr17ni4cu4nb
7-4ph alloy waa bir la soo daadiyey, oo qallafsan oo martensitic ahama oo ka kooban naxaas iyo niobium / columbium.
Astaamaha: daaweynta kuleylka kadib, astaamaha farsamooyinka ee alaabooyinka ayaa kaamil badan, iyo xoogga isdabamarinta ayaa gaari kara ilaa 1100-1300 MPa (160-190 Ksi). Darajadan looma isticmaali karo heerkul ka sarreeya 300 ℃ (572 Fahrenheit) ama heerkul aad u hooseeya. Waxay leedahay caabbinta daxalka wanaagsan ee jawiga iyo asiidh ama milix la qasi jiray. U adkaysiga daxalkiisu wuxuu la mid yahay kan 304 iyo 430.
17-4PH waa roobab martensitik ah oo sii adkeeya birta birta ah. Waxqabadka 17-4PH way fududahay in la hagaajiyo heerka xoogga, kaas oo lagu hagaajin karo iyadoo la beddelayo habka daaweynta kuleylka. Awoodda ugu weyn ee la xoojinayaa waa isbeddelka martensitikada iyo wejiga sii adkeynaya roobka ee lagu sameeyay daaweynta gabowga. Hantida yareynta 17-4PH waa mid wanaagsan, iska caabbinta daalka daalka iyo u adkaysiga dhibicda biyaha ayaa xoog leh.
· Barxadda badda, HELIDECK, aalado kale
· Warshadaha cuntada
Warshad saxarka iyo saxarka
· Aerospace (daab daab)
· Qaybaha farsamada
· Durbaanka qashinka nukliyeerka
Hore: Noocyada Cadaadiska Feejignaanta Tareenka
Xiga: Marin dhuuban oo Wanaagsan Nadiifinta Gaaska
Daawaha Alloy Resistion Resistation
Birta Daawaha u Adkeysaneysa
Nadaafadda Sare ee Birta
Birta Daawada Heerkulka Sare
Soo-saaraha Birta U Adkeysta Heerkulka
Kululaa Alloy steel silig kulul
Guryaha Birta ah ee Invar
Ultra Free-goynta ahama Steel Wire for Bal ...
Heerkulka High silig koronto, Silig kululaynta korontada, Fiilooyinka kululeeyaha korontada, Silig iska caabinta korontada, Silig koronto oo adkaysi u leh, Alaab-qeybiye koronto kululeeyaha,